News Archive - ရေကုသမှုထုတ်လုပ်သူများ | အရည်ဆပ်ပြာစီးရီး | စီးရီး -Yuanyang စက်မှုထုပ်ပိုးပုလင်း
Fixed အမျိုးအစားဖုန်စုပ်တစ်သားတည်းဖြစ်တည်ခြင်း Emulsifier
ဟိုက်ဒရောလစ် LIFT ဖုန်စုပ်တစ်သားတည်းဖြစ်တည်ခြင်း Emulsifier
ပုလင်း Pack စီးရီး
package Pack စီးရီး
အမှုန့် Mixing စီးရီး
tube ဖြ & ပိတျထားသောစက်
သိုလှောင်ခြင်း Tank စီးရီး
ယ်ယူရန် 500L ro ရေကုသမှု (PVC)
200L ကို Hydraulic LIFT ဖုန်စုပ်တစ်သားတည်းဖြစ်တည်ခြင်း Emulsifier
500L ကို Powder ဖဲကြိုးရောနှောပေးသွင်း
500L ကို Fixed အမျိုးအစားဖုန်စုပ်တစ်သားတည်းဖြစ်တည်ခြင်း Emulsifier
စက်ရုံ 500L အပူတစ်သားတည်းဖြစ်တည်ခြင်း Emulsifier
စက်ရုံ 500L တစ်သားတည်းဖြစ်တည်ခြင်း Emulsifier
full-အော်တို Pneumatic 4-ဦးခေါင်းဖြစက်
The three-roll mill is referred to asathree-roller. The three-roll mill can be divided into an experimental three-roll mill andathree-roll mill. It is mainly used for grinding various liquid pastes and paste materials such as paints, inks, pigments, plastics, အလှကုန်, soaps, ceramics and rubber. The three-roll mill is the most effective grinding and dispersing device for high…
We are excellent Chinese manufacturers. We haveawealth of business experience. We provide satisfactory products and services to our customers around the world. Our products include Jet Printer, Packaging Machine, Filling Machine, RO Water Treatment, etc. The bag filter isamulti-purpose filtering device with novel structure, small volume, simple and flexible operation, energy saving, မြင့်မားသောထိရောက်မှု, closed working and…
1/4စာမျက်နှာ1234»
ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ခဲ့ပါတယ် 2008, တရုတ်-ကွမ်ကျိုးမြို့မှာရှိတဲ့အကျော်ကြားဆုံးမြို့ကြီးများ၏တဦးတည်းတွင်တည်ရှိသည်. ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ရုံ Huadu ခရိုင်အတွင်းရှိတည်ဆောက်ခဲ့, ကွမ်ကျိုးမြို့, ဂွမ်ဒေါင်းပြည်နယ်, တရုတ်နိုင်ငံ.
C1, No.13, Dongsheng လမ်း, Xinya လမ်း, Huadu ခရိုင်, ကွမ်ကျိုး, တရုတ်နိုင်ငံ.
ကျနော်တို့ရဲ့အရည်အသွေးထုတ်ကုန်နှင့်အတူဖောက်သည်များကိုကြိုးစားကြသည်. သတင်းအချက်အလက်တောင်းဆိုခြင်း,နမူနာ & စြေးထား,ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ!
မူပိုင် ©2021 ကွမ်ကျိုး Yuanyang စက်မှုစက်ပစ္စည်း Co. ,, Ltd မှ. မူပိုင်ခွင့်များရယူပြီး.
အီးမေးလ်ပို့ရန်: info_yuanyang@84061578.com ဖုန်းနံပါတ်: +86-13434139712